Min Khant x Vestige Front-Zipped Fabric Jacket – Navy Blue/White | Buy online | SHOP.COM.MM
Min Khant x Vestige Front-Zipped Fabric Jacket – Navy Blue/White
May Khaing Hnin
Min Khant x Vestige Jacket
မင်းခန့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုအရမ်းသဘောကျပါတယ်။ ပေါ့ပါးမှုရှိပြီး အသားအရမ်းကောင်းပါတယ်။ Read more Hide
အသားကအရမ်းမထူဘဲ ဒီဇိုင်းအရမ်းမိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမဆို စတိုင်လ်ကျကျဝတ်နိုင်ပါတယ်။ Read more Hide
စိုင်းစိုင်းမွေးနေ့ရှိုးသွားဖို့ဒါလေးဝယ်ထားတယ် ရှိုးမှာ Min Khant x Vestige ဒီဇိုင်းနဲ့ အပီလန်းနေမှာသေချာသွားပြီ Read more Hide
Vestige ရဲ့အင်္ကျီလေးက အသားကောင်းလို့ ၀တ်လို့ကောင်းပါတယ်။ Read more Hide
I learnt in fashion week the other day that the skin of jackets made by Min Khant are amazingly cool inside in contrast to the outside look. Love this design. Read more Hide
It isalong sleeved fabric jacket withafront-zipped design.
Specifications of Front-Zipped Fabric Jacket – Navy Blue/White